အောင်လ နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုင်းကနေ ကြည့်ကြမလဲ ? - khitalinmedia
အောင်လ နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုင်းကနေ ကြည့်ကြမလဲ ?
October 9, 2019 Khitalin Media သတင္း 0
လာမယ့် အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ ကတော့ အာရှက MMA ပရိသတ်တွေ အတွက် ထူးခြားတဲ့ နေ့တစ်နေလို့ ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး ၊ အဲဒီနေ့မှာ တစ်နေကုန် One Championship ပွဲစဉ်တွေကို တိုက်ရိုတ် ကြည့်ရှုခွင့် ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျပန်မှာ ကျင်းပမယ့် အဲဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ အမည်ကို One : Century လို့ အမည်ပေးထားပြီး ၊ One Championship သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက် အခမ်းနားဆုံးနဲ့ အာရှ ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး MMA ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီပြိုင်ပွဲအတွင်း ကမ္ဘာကျော် ဖိုက်တာတွေရဲ့ ချန်ပီယံလုပွဲပေါင်း များစွာ ပါဝင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ပွဲကိုလဲ Part 1 နဲ့ Part2ဆိုပြီး ခွဲခြား ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် အောင်လ အန်ဆန်း ရဲ့ ပွဲစဉ်ကတော့ Part2ရဲ့ အဓိက ပွဲအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတာ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ ရဲ့ ညနေခင်းလောက်မှာ စတင် ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်ကြဖွယ်ရှိနေပါတယ်။
Part 1 ပွဲစဉ်တွေထဲမှာတော့ အမျိုးသမီး Atomweight World Championship လုပွဲ အဖြစ် စင်္ကာပူက နာမည်ကျော် ဖိုက်တာ အိန်ဂျလာ လီ နဲ့ တရုတ်သူ ရှောင်ဂျီနန် တို့က ထိုးသတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Grand Prix Championship ရဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေကိုလဲ ဒီကဏ္ဍမှာပဲ ဆက်လက် ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖလိုင်းဝိတ် Grand Prix Championship ဗိုလ်လုပွဲ အဖြစ် UFC ကနေ ပြောင်းရွှေ့ ထိုးသတ်လာတဲ့ ဒီမက်ထရီးရပ် ဂျွန်ဆင် ဟာ ဖီလစ်ပိုင် နိုင်ငံသား ဒန်နီ ကင်ဂတ် နဲ့ ဗိုလ်လုပွဲ အဖြစ် ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်မှာပါ။ လိုက်ဝိတ် Grand Prix Championship ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ စင်္ကာပူ က ဖိုက်တာ ခရစ်ရှန် လီ ဟာ တူရကီ က အာစလာနာလိဗ် နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် သွားမှာပါ။ (အိန်ဂျလာ လီ နဲ့ ခရစ်ရှန်လီ တို့ဟာ မောင်နှမ တွေ ဖြစ်ပါတယ်။)
မြန်မာပြည်က အခြား ဖိုက်တာ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဖိုးသော်ဟာ တောင်ကိုရီးယားက ဖိုက်တာ ယွန်ချန်မင် ကို Part 1 ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ ထိုးသတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Part 1 ပွဲတွေကိုတော့ အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပြီး Skynet ရှိတဲ့ ပရိသတ်တွေက မနက် Skynet Sport3နဲ့ Skynet Sports HD လိုင်းတွေမှာ မနက် 6.30 ကနေ စတင် ကြည့်ရှုလို့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ချန်ပီယံ လုပွဲတွေကိုတော့ နံနက် 9.30 ဝန်းကျင်မှာ စတင်မှာ ဖြစ်ကာ ၊ MNTV မှာလဲ ပြသသွားမယ်လို့ လို့ သိရပါတယ်။
Part2ပွဲစဉ်တွေမှာတော့ MMA ရွှေခါးပတ် လုပွဲ က2ပွဲ နဲ့ မွေးထိုင်းချန်ပီယံလုပွဲ 1 ပွဲ ၊ Kickboxing လုပွဲ တစ်ပွဲတို့ နဲ့ အတူ အခြား ပွဲစဉ်ပေါင်း များစွာ ပါဝင်လျှက်ရှိနေပါတယ်။ Parts2ရဲ့ အဓိက ပွဲကတော့ အောင်လ အန်ဆန်း နဲ့ ဗီရာ တို့ရဲ့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ လုပွဲ ဖြစ်ပြီး ၊ ဘီဘီယာနို ဖာနန်ဒက် နဲ့ ဘယ်လီဂွန် တို့ရဲ့ ဘန်တန်ဝိတ် ရွှေခါးပတ်လုပွဲကလဲ ပရိသတ်တွေ အတွက် ဆွဲဆောင်မှု အပြည့် ရှိနေဦးမှာပါ။
ဟန်ရေးပြ အစီအစဉ်ကိုတော့ မနေ့က ဂျပန်မှာပဲ ပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီး ၊ ဗီရာဟာ အောင်လ ရဲ့ ခြေထောက်ကန်ချက်တွေကို ခုခံဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး ပြင်ဆင်လာတယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ဟန်ရေးပြသွားခဲ့ပါတယ်။ သို့သော် သူဟာ ဟန်ရေးပြတဲ့ အခိုက်အတန့်အတွင်းမှာပဲ ခွျှေးတွေ တော်တော်ထွက်နေခဲ့တာကြောင့် ၊ သက်လုံး ပိုင်းတော့ အားနည်းနေတယ်လို့ ယူဆချင်စရာပါ။
အောင်လ ကြိုးဝိုင်းထဲကို ဟန်ရေးပြဖို့ ဝင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ ဂျပန်က ပရိသတ်တွေက တစ်ခဲနက် ကြိုဆိုခဲ့ကြသလို ၊ မြန့်မာ့ သူရဲကောင်းကြီးကလဲ တိုက်ကွက်မျိုးစုံကို ပြသသွားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် ဗီရာကို ထိုးသတ်ရမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အောင်လ ရဲ့ ဝိတ်ကလဲ ပြည့်လာတယ်လို့ ခံစားရပြီး ၊ သူ့ရဲ့ ကန်ချက်တွေကို ထုတ်သုံးချိန်မှာလဲ ၊ ပြင်းအားက တော်တော်လေးကို ရှိနေခဲ့ကာ သတိထားမိပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အောင်လ ရဲ့ နည်းပြ ဟင်နရီ ဟုဖ် ဟာ ကန်ချက်တွေ လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ နေရာမှာ နာမည်ကြီးတစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့် ၊ အခုလို အားပါတဲ့ ကန်ချက်တွေ ထုတ်သုံးလာဖို့ ပြင်ဆင်လာခဲ့ဟန် ရှိပါတယ်။
လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလ 13 ရက္ေန႔ ကေတာ့ အာရွက MMA ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ထူးျခားတဲ့ ေန႔တစ္ေနလို႔ ဆိုရမွာ ျဖစ္ၿပီး ၊ အဲဒီေန႔မွာ တစ္ေနကုန္ One Championship ပြဲစဥ္ေတြကို တိုက္႐ိုတ္ ၾကည့္ရႈခြင့္ ရရွိသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်ပန္မွာ က်င္းပမယ့္ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အမည္ကို One : Century လို႔ အမည္ေပးထားၿပီး ၊ One Championship သမိုင္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ အခမ္းနားဆုံးနဲ႔ အာရွ ရဲ႕ အႀကီးက်ယ္ဆုံး MMA ၿပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီၿပိဳင္ပြဲအတြင္း ကမာၻေက်ာ္ ဖိုက္တာေတြရဲ႕ ခ်န္ပီယံလုပြဲေပါင္း မ်ားစြာ ပါဝင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၊ ပြဲကိုလဲ Part 1 နဲ႔ Part2ဆိုၿပီး ခြဲျခား က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမန္မာ့ ဂုဏ္ေဆာင္ ေအာင္လ အန္ဆန္း ရဲ႕ ပြဲစဥ္ကေတာ့ Part2ရဲ႕ အဓိက ပြဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၊ ေအာက္တိုဘာလ 13 ရက္ေန႔ ရဲ႕ ညေနခင္းေလာက္မွာ စတင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္ၾကဖြယ္ရွိေနပါတယ္။
Part 1 ပြဲစဥ္ေတြထဲမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီး Atomweight World Championship လုပြဲ အျဖစ္ စကၤာပူက နာမည္ေက်ာ္ ဖိုက္တာ အိန္ဂ်လာ လီ နဲ႔ တ႐ုတ္သူ ေရွာင္ဂ်ီနန္ တို႔က ထိုးသတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Grand Prix Championship ရဲ႕ ဗိုလ္လုပြဲေတြကိုလဲ ဒီက႑မွာပဲ ဆက္လက္ က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဖလိုင္းဝိတ္ Grand Prix Championship ဗိုလ္လုပြဲ အျဖစ္ UFC ကေန ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ထိုးသတ္လာတဲ့ ဒီမက္ထရီးရပ္ ဂြၽန္ဆင္ ဟာ ဖီလစ္ပိုင္ ႏိုင္ငံသား ဒန္နီ ကင္ဂတ္ နဲ႔ ဗိုလ္လုပြဲ အျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္မွာပါ။ လိုက္ဝိတ္ Grand Prix Championship ဗိုလ္လုပြဲမွာေတာ့ စကၤာပူ က ဖိုက္တာ ခရစ္ရွန္ လီ ဟာ တူရကီ က အာစလာနာလိဗ္ နဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားမွာပါ။ (အိန္ဂ်လာ လီ နဲ႔ ခရစ္ရွန္လီ တို႔ဟာ ေမာင္ႏွမ ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။)
ျမန္မာျပည္က အျခား ဖိုက္တာ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့ ဖိုးေသာ္ဟာ ေတာင္ကိုရီးယားက ဖိုက္တာ ယြန္ခ်န္မင္ ကို Part 1 ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ ထိုးသတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
Part 1 ပြဲေတြကိုေတာ့ ေအာက္တိုဘာလ 13 ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းမွာ က်င္းပမွာ ျဖစ္ၿပီး Skynet ရွိတဲ့ ပရိသတ္ေတြက မနက္ Skynet Sport3နဲ႔ Skynet Sports HD လိုင္းေတြမွာ မနက္ 6.30 ကေန စတင္ ၾကည့္ရႈလို႔ ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ခ်န္ပီယံ လုပြဲေတြကိုေတာ့ နံနက္ 9.30 ဝန္းက်င္မွာ စတင္မွာ ျဖစ္ကာ ၊ MNTV မွာလဲ ျပသသြားမယ္လို႔ လို႔ သိရပါတယ္။
Part2ပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ MMA ေ႐ႊခါးပတ္ လုပြဲ က2ပြဲ နဲ႔ ေမြးထိုင္းခ်န္ပီယံလုပြဲ 1 ပြဲ ၊ Kickboxing လုပြဲ တစ္ပြဲတို႔ နဲ႔ အတူ အျခား ပြဲစဥ္ေပါင္း မ်ားစြာ ပါဝင္လွ်က္ရွိေနပါတယ္။ Parts2ရဲ႕ အဓိက ပြဲကေတာ့ ေအာင္လ အန္ဆန္း နဲ႔ ဗီရာ တို႔ရဲ႕ လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္ ခ်န္ပီယံ လုပြဲ ျဖစ္ၿပီး ၊ ဘီဘီယာႏို ဖာနန္ဒက္ နဲ႔ ဘယ္လီဂြန္ တို႔ရဲ႕ ဘန္တန္ဝိတ္ ေ႐ႊခါးပတ္လုပြဲကလဲ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈ အျပည့္ ရွိေနဦးမွာပါ။
ဟန္ေရးျပ အစီအစဥ္ကိုေတာ့ မေန႔က ဂ်ပန္မွာပဲ ျပဳလုပ္သြားခဲ့ၿပီး ၊ ဗီရာဟာ ေအာင္လ ရဲ႕ ေျခေထာက္ကန္ခ်က္ေတြကို ခုခံဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျပင္ဆင္လာတယ္ ဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳး ဟန္ေရးျပသြားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သူဟာ ဟန္ေရးျပတဲ့ အခိုက္အတန႔္အတြင္းမွာပဲ ေခြွ်းေတြ ေတာ္ေတာ္ထြက္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ ၊ သက္လုံး ပိုင္းေတာ့ အားနည္းေနတယ္လို႔ ယူဆခ်င္စရာပါ။
ေအာင္လ ႀကိဳးဝိုင္းထဲကို ဟန္ေရးျပဖို႔ ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ဂ်ပန္က ပရိသတ္ေတြက တစ္ခဲနက္ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသလို ၊ ျမန႔္မာ့ သူရဲေကာင္းႀကီးကလဲ တိုက္ကြက္မ်ိဳးစုံကို ျပသသြားခဲ့ပါတယ္။အထူးသျဖင့္ ဗီရာကို ထိုးသတ္ရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ေအာင္လ ရဲ႕ ဝိတ္ကလဲ ျပည့္လာတယ္လို႔ ခံစားရၿပီး ၊ သူ႔ရဲ႕ ကန္ခ်က္ေတြကို ထုတ္သုံးခ်ိန္မွာလဲ ၊ ျပင္းအားက ေတာ္ေတာ္ေလးကို ရွိေနခဲ့ကာ သတိထားမိပါတယ္။
အထူးသျဖင့္ ေအာင္လ ရဲ႕ နည္းျပ ဟင္နရီ ဟုဖ္ ဟာ ကန္ခ်က္ေတြ ေလ့က်င့္ေပးတဲ့ ေနရာမွာ နာမည္ႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ၊ အခုလို အားပါတဲ့ ကန္ခ်က္ေတြ ထုတ္သုံးလာဖို႔ ျပင္ဆင္လာခဲ့ဟန္ ရွိပါတယ္။
နှစ််ပေါင််းသုံးဆယ် ခွင့်ပျက်ရက််မရှိိခဲ့သည့် ဆရာမ၅ဦး ကျပ် ၅သိန််းစီဆုရ …
ကန်စွန်းရွက်ကြော် ကြိုက်တတ်လား..? အရင်ကထက် ပိုစားကြစို့နော်…
Quarentine မိထားေပမယ့္လည္းသံဃာႏွင့္ သီလရွင္ အပါး ၁၃၀၀၀ နီးပါးဆြမ္းကိစၥအတြက္ ေထာက္ပံ့ လႉဒါန္းေပးခဲ့တဲ့ ”ဆရာေတာ္အရွင္ ေေဆကိႏၵ ”